5 zvikanganiso zvekudzivisa kana uchivaka iyo IoT app - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Indaneti yezvinhu,, IoT Anwendung
Takangofungidzira kuti mhuka dzedu dzinovaraidza dzichitaura nesu asi wakambofungidzira here imba yako ichitaura newe kana motokari yako, kana mikova ichitaura nemagetsi emagetsi! The Internet akaita kuti izvi zvikwanisike kubatanidza zvinenge zvese zviripo zvakatipoteredza. Izvo IoT yakarongedzwa neramangwana, zvinopfuura fungidziro yemunhu wese. Kutakurwa kweese smart midziyo yemumba, ingave chengetedzo uye chibatiso masisitimu akaita searamu, makamera, masensa kana midziyo yakangwara senge vagadziri vekofi, muchina wekuwachisa, ma dryer kana chero midziyo yemagetsi, inogona kuwedzera. kaviri ne2020. Asi nepo IoT ichiita zvine musoro nenzira dzese kune mutengi wepakati, kana chishandiso cheIoT chisina kugadzirwa nenzira kwayo, zvinogona kutungamira mukusvotwa uye kushungurudzika pane kubatsira.
Izvo zvakakosha kuti iwe paunenge uchikudziridza IoT kunyorera kune ako akangwara zvishandiso, ita shuwa kuti haubvise mashoma akakosha zvinhu izvo zvinoita kuti iyo app ishande zvakanyanya mushe uye zvinobudirira. Dzivisa izvi zvakapusa zvikanganiso kuti urichengetedze kubva pakuve dud uye uite kuti rimire kubva kune vamwe vese.
1. Kuregeredza Scalability
Scalability chinhu chakakosha kana zvasvika pakugadzira maapplication. Izvo zvakakosha kuti uchengetedze nhamba yevanhu vanozoshandisa yako app zuva nezuva. Izvi zvichakubatsira iwe kuita fungidziro uye kugara wakagadzirira kushanduka kamwe kamwe uye kuwedzera mutoro. Zvikasadaro iwe unogona kupikisa njodzi yekunonoka kana kukanganisa yekubatanidza nekudaro uchidzikisa ruzivo rwemushandisi newebhusaiti yako. Saka paunotanga kuvaka yako app, ita shuwa kuti iwe unofunga nezve scalability uye kurodha switch paapp uye kuvaka a Software iyo inogona kugara ichigadziridzwa kuti igamuchire mushandisi mutoro pasina kukanganisa vashandisi vayo.
2. Kufuratira matanho eKuchengetedza
Vatsvagiri veMIT neMichigan vakawana maburi akawandisa mune mamwe mahombe brand smart madivayiri ayo anogona kupa matsotsi mamwe mapoinzi ekupinda kutyora mushandisi. chibatiso. Saka mamwe makambani ari kuisa chibatiso mune zvigadzirwa zvavo zvakanyanya. Mushure mekurwiswa kwakakonzerwa neMirai botnet pakupera kwegore rapfuura, yaive yekumutsa kufona kune wese munhu uye kuedza kwakawanda kunodiwa mune ramangwana kuchengetedza matsotsi kure.
IoT ichiva musoro unopisa, zvakare ndicho chakanangwa nevatambi - IoT zvishandiso inogona kushandiswa nevanokuvadza kuti vawane ruzivo rwakawanda rwepachivande kubva kune vashandisi. Saka paunenge uchigadzira IoT app, ita shuwa kuti iwe unochengetedza app yako kubva mukurwiswa kwekodhi jekiseni, dzikamisa nzvimbo yekurwisa, ronga zvekuchengetedza zvakachengeteka uye chengetedza chero ruzivo rwakaunganidzwa rwakavanzika. Kuchengeta chibatiso kukosha kwako kwaizodzivirira mudziyo kubva kune chero kutyora kana kurwiswa kukuru.
3. Kusashandisa masisitimu aripo
Paunenge uchikudziridza chishandiso cheIoT, funga nhanho idzi ina:
Iyo yekupinza layer- Software uye zvivakwa zvinounganidza data nekurironga
The analytics layer- inogadzirisa iyo data yakarongeka
Yekupedzisira-mushandisi mwero- yekupedzisira app iyo iyo mushandisi inopindirana
Developers inoda kuve nehanya chete neyekupedzisira-mushandisi mazinga uye iyo analytics ye kuvandudza kwesarudzo uye nokuda kweizvozvo, kune maturusi ebudiriro ane mafambiro akatemerwa, kuitira kuti rimwe basa rekunyora patsva richengetedzwe. Iye zvino fungidzira muchina wekofi sechinhu chine imwe mhando yemicroprocessor inogadzirisa nguva yekugadzira kofi, imarii inodiwa kune izvo nezvimwe. The analytics layer yaizorairidza muchina wekuita basa, nepo mushandisi achiona app chete kwaaizopedzisira aironga kugadzira kofi yaanofarira pane imwe nguva. Izvi ndezvekushandisa maitiro akafanana kana tikati maitiro aripo ebasa.
4. Kusafunga ramangwana
Ronga ramangwana. Nekuti kuronga kwako app kune shanduko izvozvi kunokubatsira iwe kuchengetedza hombe mutengo gare gare. Tekinoroji iri kuchinja nekumhanya kukuru uye pasina nguva tekinoroji yanhasi yaizovewo isingachashandi. Hapana anogona kunyatso fungidzira kuti zvinhu zvichachinja zvakadii mune ramangwana, asi isu tine zano kana zvasvika pakugadzira iyo app. Vanhu havafanirwe kuenda kunogadziridza kwavo kweavo IoT zvishandiso kunge mafiriji, saka iwe unofanirwa kuchengeta cheki yezviitiko padhuze.
5. Kubata zvikanganiso
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, kuitisa yako app. Funga kubata chako kunyorera munzvimbo dzinopfuura imwechete yedhata pane kuzviitira nzvimbo imwechete. Izvi zvinovimbisa kusavhiringidzika sevhisi uye kudzikisira latency munguva dzekupindura kana paine tsaona dzipi nedzipi. Vashandisi havasi vanogara vachishivirira zvikanganiso zve server kana nungo dzekupindura nguva.
Kugadzira yakanaka IoT kunyorera chako chishandiso kunogona kuwedzera yako mhando kuvimbika uye kugutsikana kwevatengi. Pane kupokana, kuita izvi zvikanganiso kunogona kuendesa chigadzirwa chako mugomba.
We at NewGenApps vanga vachishanda na IoT zvishandiso Kwemakore matatu apfuura, kusanganisira Amazong IoT zvishandiso. Kana iwe uchida zano rekuti ungatanga sei kugadzira yako IoT maapplication, ndapota bata.
Maitiro ekubata Dhizaini Kubatanidza muIoT Midziyo?
Sep 14 | kubatanidzwa kwedata, Indaneti zvinhu, IoT Anwendung
Sezvo IoT inopfuurira pamwe nekurira, zvinoshandiswa zvinoshanda zviri kuwedzera. Heano mashoma matipi ekuti ungatarise sei kubatanidzwa kwedata mumidziyo yeIoT.
Yechokwadi Mienzaniso yeInternet-yezvinhu-Kutonga Nyika
Aug 29 | Indaneti zvinhu, IoT, IoT Anwendung
Zvinenge zvisiri kuwedzeredza kutaura kuti iyo Internet yezvinhu (IoT) inomiririra chikamu chinotevera chedhijitari shanduko mumaindasitiri.
Nzira gumi IoT inobata bhizinesi renyika
Dai 19 | Indaneti yezvinhu,, IoT
10 nzira idzo Internet yezvinhu iri kukanganisa zvinhu zvakasiyana zvebhizinesi renyika